Waa Tuma Berbera Muxuu Yahay Maalagashiga Seddex Geesodka Ahi Iyo Sirta Ku Duugan Qalinkii Nimcaan Cadaani
(Hadhwanaagnews) Wednesday, March 14, 2018 07:52:19
Waxaa hoos u dhac ku yimid adeegsiga dekadda taas oo ay ka dambeysey xayiraadi Carabtu kusoo rogtey xoolihi soomaalida
Berbera waa magaalo caan ah, oo aad u da wayn, sidda ay ku tilmaaman tahay buugaagta taariikhdda ee ay qoreen rag uu ka mid yahay Ibnu batuta. Waxa magaaladda dagan, dad ku dhow ilaa iyo 223,000 oo qof qoyaastii. waana ay sii kordhaysaa tiradda dadku. Jawiga magaalada aad ayuu u-kulushahay, khaasatan xilliga xaggaga oo uu heerkulku gaaro illaa 45 degree.
Marrsada berberi waa Buqcada istaraatiji ah oo ku talaa Gacanka cadmeed isla markaan manadaqada geeska Africa iyo Qaaradaha Dunida isku xidha.
Waxaa hoos u dhac ku yimid adeegsiga dekadda taas oo ay ka dambeysey xayiraadi Carabtu kusoo rogtey xoolihi soomaalida sanadadii la soo dhaafay
oo hada la furay . Shaqada ugu weyn ee hadda dekada kala wado waxaa wayn alaabta ugu soo degta dalka Etoobiya kadib markii wadanka Eritrea ka go´day dalkaas, ka xidhayna xidhiidhka Badacas.
Qarnigii 19-naad horraan-tiisii ilaa dhammaadkiisii, magalaada Berbera dadka deggenaa waxay u badnaayeen Carab iyo Hindi, balse waxaa dadkaa ajaanibka ah u ahaa "Abbaan" dad soomaaliyeed, waayo suurtagal may ahayn in qof qalaad uu Abbaan la'aan ku dhexjoogo magaalooyinka xeebaha Somaliland.
Nin la odhan jiray Drake-Brockman oo Somaliland ka qoray buug aad u faahfaahsan 1912-kii wuxuu ku qiyaasay tirada dadka Berbera inay u dhaxay-say 20,000 ilaa 40,000 xilliga qaboobaha, balse xilliga xagaaga ama kulaylaha ay tiradaasi hoos ugu soo dhici jirtay 5000-10,000 oo qof. Berbera waa dakeda uguwayn Geeska Afrika. magaalada berbera iyo gobolka saaxil waxa dega qabiilka isaaq oo dhan iyo qabiilooyinka la hayb sooco, waxaa kaloo dhismayaasheeda wax ku leh beelaha kale ee soomaaliland dega sida hartiga.
Dekadan Berbera waa ill dhaqaale oo guud ahaan Somaliland ku tiirsantahay si toos iyo si dadban labadab sida ay ii xaqaiijeen Qolyo Khubaro oo derista siyaadaha ah waa Goob Muhiim Ah oo dhamaan dadyowga Africa Fiiro Gaar ah uu leeyahiin Ka mandaqada geeska Africa ahaan
Sababah keenay in Ethiopia laga siiyo saami Heerkiisu sareeyo waxa la odhan karanaa waa qodobo dhawor ah hawgu horeyso Tirda dadka ku nool Ethiopia oo Aad uu badan isla markaan aan laheyn Marrso ama dekad, ay waxa kala soo degaan.
Ethiopia oo Ah dalka keliya ee si joogta ah waxaa ugala soo dega dekadan ayaa iyadun ah mid la xusi karo maadam ayy dadyowga Ethiopia io Somaliland yihiin dadyow bahwadaag ah dhinaca dhaqan dhaqaale iyo xidhiidh ganacsiyeed Qoto dheer.
Maxaa sababay in Xukuumada fedaralka Somalia Dhawaaq sarre ku diido ama liddi ku noqoto heshiisakan seddex Geesoodka ah.?
Waxaan odhan karan waxay wiiqeysa sharafki iyo milaghii dawaldadnimo ee Somalia marka heshiis aan waxab laga ogeysiin si wada jira ay uu saxeexaan Emartaka carabta Somaliland iyo Ethiopia Dhanka kale waxa meesha ka baxay Xaqul Qalainkii ay wassarda maaliya Somalia heli laheyda.
Qodobka ugu miihimasan ee Ah Heshiis Ganacsiyeedkan wadajirka waxa ku soo ururayao ayaa lagu sheegay Maalgashi (Investment) waxaa la yiraahdaa in aad lacag ganacsi gelisid kadibna aad ka raadisid faaido,maalgashiga Sidoo kale maalgashi waxaay la yiraahdaa wax kasto ku saabsan sidii aad ku samaysan laheed saving ama in aad hanti meel dhigatid kadib markii dalabka ama in uu sameeyo sicirka siyaado aad dib usii iibisid.
Afeef: Qoraa madax banan oo cilmi baadhis ku sameeya siyaasdah geeska africa iyo kuwa bariga dhexba.